Qaar ka Mid ah Qurba joogta Soomaaliyeed oo Bilaabay inay Dalka Maal-gashtaan“SAWIRRO” | Radio Muqdisho
Qaar ka Mid ah Qurba joogta Soomaaliyeed oo Bilaabay inay Dalka Maal-gashtaan“SAWIRRO”
Published on June 23, 2013 by Cilmi Waare · No Comments · 5,002 views
Qaar ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee ka yimid qurbaha ayaa bilaabay qorshayaal la xiriira mashaariic dib u dhis ah oo lagu sameynayo deegaanka Jaziira ee duleedka magaalada muqdisho.
Munaasaba ay maanta ku soo bandhigayeen mashaariicda dhsimo oo ay doonayaan in ay ka hir galiyaan deegaan Jaziira ayaa waxaa ka qeyb galay mas’uuliyiin uu kamid yahay gudoomiyaha Gobolka Banaadir, Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan), gudoomiyaha Degmada Wadajir, ma’suuliyiin ka socotay rugta ganacsiga soomaaliyeed iyo marti sharaf kale oo ay ku jireen dad ajaanib ah.
Dhismayaasha ay dhisayaan ayaan ah dhismayaal ay u dhanyihiin dhamaan adeegyada kala duwan ee bulshada sida, iskuulaadka, masaajidyo, suuq dadku ay u adeegan doonaan iyo xarumo caafimaad.
Qaar kamid ah mas’uuliiinta ku howlan dhismayashaasi oo uu kamid yahay Maxamuud Cismaan Maxamed (taako) ayaa sharaxay ujeedka ay uga gol leeyihiin mashaaricdan dib u dhiska ah,isagoo sheegay in ay go,aansadeen inay maalgashtaan dalkooda si ay ugu daydaan dadka kale ee soomaaliyeed.
Gudoomiyaha maamulka Degmada Wadajir Axmed Xasan Cadow (Axmed Daaci) oo goobtaasi ka hadlay ayaa sheegey in arintini ay qeyb ka tahay horumarka magaalada muqdisho. Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur(tarsan) oo goobtaasi khudbad dheer ka jeediyey ayaa sheegey in muhiim ay tahay in soomaalidu ay fahmaan maalgashiga dhulkooda hooyo, isagoo ku booriyay dadka soomaaliyed ee qurba joogta ah iyo ganacsatada kale in ay qaadaan talaabo taasi la mid ah.
Arintani ayaa u muuqata mid albaabada u furaysa in soomaalida kale oo ku nool gudaha iyo dibada dalka ay ku dhiiradaan maal gashi ay ku sameeyeen dalkooda taasi oo ka qeyb qaadanaysa dib u soo celinta ilihii dhaqaale ee dalka ayna abuurmi karaan fursado badan.